(စစ်မှန်သော ယေရှုဘုရား၏အသင်းတော် မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
ရည်ညှန်းချက်များ and Further Reading[ပြင်ဆင်ရန်]
↑ ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်။ ၃:၅ Archived 24 September 2011 at the Wayback Machine.; ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်။ ၃:၁၆ Archived 19 February 2010 at the Wayback Machine.; တမန်တော်ဝတ္ထု။ ၂:၃-၈ Archived 25 September 2011 at the Wayback Machine., ၁ဝ:၄၈ Archived 25 September 2011 at the Wayback Machine.
↑ ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်။ ၁၃:၁-၇။ 24 September 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 20 October 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ကောရိန္သုဩဝါဒစာပဌမစောင်။ ၁၀:၁၇ Archived 25 September 2011 at the Wayback Machine., ၁၁:၂၆ Archived 25 September 2011 at the Wayback Machine.; ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်။ ၆:၅၃ Archived 24 September 2011 at the Wayback Machine.
↑ ဟေဗြဲဩဝါဒစာ။ ၄:၉-၁၁။ 24 September 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 20 October 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်။ ၃:၁၆ Archived 24 September 2011 at the Wayback Machine.; ကောရိန္သုဩဝါဒစာပဌမစောင်။ ၁၅:၃-၄ Archived 25 September 2011 at the Wayback Machine.; တမန်တော်ဝတ္ထု။ ၄:၁၂ Archived 25 September 2011 at the Wayback Machine.
↑ ဧဖက်ဩဝါဒစာ။ ၂:၈။ 25 September 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 20 October 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်။ ၂၅:၃၁-၃၄ Archived 19 February 2010 at the Wayback Machine.; သက်သာလောနိတ်ဩဝါဒစာပဋ္ဌမစောင် ၄:၁၆-၁၇ Archived 25 September 2011 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စစ်မှန်သောယေရှုဘုရား၏အသင်းတော်&oldid=726268" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၁:၃၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။